Madaxweyne Shariif oo booqday Xerooyinka Ciidanka DFKM ah. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Madaxweyne Shariif oo booqday Xerooyinka Ciidanka DFKM ah.
Madaxweyne Shariif oo booqday Xerooyinka Ciidanka DFKM ah.
Madaxweynaha DFKM ah ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed ayaa maanta booqasho ku tegay xeryo ay Ciidamada DFKM ah ay ku leeyihin qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Xeroyinka u Madaxweynuhu booqday ayaa waxaa ay ku yaalaan Xaafadaha Wadajir iyo Dharkeenley oo ku yaala Koonfuurta magaalada Muqdisho,waxaana u halkaas khudbad dheer uga jeediyey Ciidanka halkaas ku sugan.
Khudbada u Madaxweynaha u jeediyey Ciidanka DFKM ah ayaa waxaa u kaga hadlay arimo fara badan oo khuseeya dalka Soomaaliya,waxaana u soo hadal qaaday qorshaha DFKM ah ee ku aadan la wareegida dhamaan gobolada dalka Soomaaliya.
Wuxuuna sidoo kale ka hadlay qaabka ay u howlgali jireen Ciidanki Xooga dalka ee Soomaaliyeed,isagoo si qoto dheer uga waramay taariikhda ay lahaayeen Ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed.
Ugu dambeynti waxaa u sheegay in Ciidanki xooga dalka Soomaaliya ay ahaayeen ciidan aad u asluub wanaagsan lagana baahanyahay Ciidanka maanta u booqday in ay raacaan wadada ay raaceen ayna ku deydaan.
Si kastaba tani ma noqonayso marki ugu horeysay u Madaxweyne Shariif Sheikh Axmed u booqasho ku tego fariisimada ay Ciidanka DFKM ah ku leeyihin gudaha magaalada Muqdisho.waxaana ay Booqashadaan tahay mid aan hore loo si shaacin ama mid kedis ah.
Maxamed Kaafi Sheikh Abuukar